Saotra anao ry dada ! - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
Andinin-tononkalo vitsivitsy no nangonina ka anehoana:
- ny maha loharano sy andry ny raim-pianakaviana
- ny olana manoloana ny fahabangany
- ny fitiavany hafa mihitsy.
Toa an'i Neny dia loharano nipoirana izy, tsy faharoa na voalohany fa mitovy araka ny namaritan'i Régis Rajemisa-Raolison:
"Ny lanjam-pitian'izy roa,
ka tsisy izay tombo sy hala".
Tsy ny anaran'i Neny ihany no anombohan'ny zaza mibadabada fa ny an'i Dada koa araka ny anehoan'i MEJA Penina azy.
"Inay aho nibada
Dia ny anaran'i dada
No tsy afaka am-bava
Ka mirana ny tava"
Loharanom-pitenenana izy ireo ary loharanon'ny fiainana manontolo hoy i Ony Ravorombato:
"fototry ny fiaviana
Misy lanjany avokoa ireo teny tsirairain'ny poety ireo.
Ankoatra ny maha loharano an'i Dada dia andry iankinana izy, raim-pianakaviana, mamelona ary manao izay tratry ny heriny.
"Vao maraina dia indro lasa tsy reraka na mitaraina,
hanainga tongotra hiasa hanasoa ireo sombiniaina" - Li-Blou
Miverimberina eo imolotry ny poety io herim-pon'i Dada vao maraina io toy ny niangalian'i Maeva 74 azy ity:
"Dada, ilay nisahirana
nifoha maraina isan'andro,
nikaroka ireo manahirana..."
Mifoha maraina ny raim-pianakaviana ary tsy mikendry afa-tsy izay hamelomana vady aman-janaka. Misy lasa lavitra ary misedra ny mafy aza:
"Herim-pon'i Dada no nahatsangy antsika
Nizaha ny tsy nisy tany rehetra tany;
Orana nikija na hasasarana na hatsiaka
Nihafiany avokoa fa tsy nahoany izany" - miHAJA.
Tsy aim-beri-maina akory ny vokatry ny herim-pony. Tsy niolankolana i Jean Narivony nanamafy:
"izaho no tomady sy tena salama "
I dada no vizana be nikarama"
Afaka mirehareha ny zanaka fa nahaolona tokoa izy. "Noho Idada no velon-tsy ory", Régis Rajemisa-Raolison. Miharihary ao amin'ny tononkalon'i Ratsimaholy Francinet koa izay rehareha izay:
"Io mifoha maraina be
Mivikiviky raha mandeha
Hiasa hamelona anay
Mafy be i Dadanay"
Nihafy ho antsika i Dada, niaritra orana mikija sy hatsiaka hoy i miHAJA etsy ambony. Fola-damosina aza moa hoy ny Malagasy. Raha mbola tsy mahay mandeha ny zaza dia efa iny i Dada milanja sady mamihina ireo tongon-janany mba tsy hianjera: "Idada nilanja antsangory", Régis Rajemisa-Raolison. Ary na efa mahay mamindra aza ilay zaza dia lanjainy hatrany raha vao somary lavitra ny dia. Tsy vitan'izay fa na efa manana ny maha izy azy eo amin'ny fiaraha-monina aza ny zanany dia mbola eo ihany i Dada mitsinjo. Mahasapa izany i Sunny Razakamanana amin'ny fotoan-tsarotra:
"I dada malala
Ampinga fiaro ny tratrako osa
Mandrisika ny heriko tena kanosa".
Tsy vitan'ny hoe "ampinga fiaro" ihany fa na dia ny fieritreretana azy fotsiny mandritra ny olana sedraina aza dia efa ampy hanome hery:
"Raha mila herin-tsaina fa mafy ny atrehina,
Lany herim-po ka mitady izay mba tehina:
I Dada no tadidy fa izy tsy mba ketraka,
Na dia esoesoina, tsy tia mipetrapetraka".
I Pissoa (Ikala Mi) no nipoiran'izany andinin-teny maneho fahatokisana izany. Tsy afaka ao an-tsaina ny herim-pony lafatra, antoky ny aina ary mahasambatra.
Indrisy anefa fa misy ireo zanaka tsy mba afaka miaina izany fahasambarana izany.
Raha banga ny toerana
Misy ireo ray tsy mahatomombana tsara ny adidiny. Izy ireo indrindra no iantefan'ny alahelon'i Mampandry ny Aina:
"Ny azy ny miloka no tena niofanany,
Sy ananany traikefa.
Dia mampijaly vady amin'ny fomba rehetra rehetra.
No mampiferotra aina ny zanany naterany.
Ny hoe mba hitsikaraka dia ohatra ny hoe tsy aferany."
Ao koa ireo ankizy misedra ny fahabangana noho ny hetraketraky ny fahafatesana. Tsy nahasakana an'i Raozigasy hanakanto ny andinin-teniny izany:
Raha mbola teo izao ianao
Dia ho anao no natao
Ny fiarahabana voalohany
Zay vao ny hafa sy ny tohiny"
Raha i Neny kosa no efa lasa mialoha dia azo ianteherana i Dada hoy Maharavo Andriamalinarivo:
Ary koa miravoa!
Fa i Dada efa eto".
Manana fahatokisana amin'i Dada koa i Anarim izay mitraka ary miantsoroka ao anatin'ny haizim-pahoriana ny adidy napetraky ny reny:
"Fa na lasana aza i Neny
Ka zary maizina ny tany
Tsy nataonao ireny
Ny fitaizana anay"
Fitiavana hafa mihitsy
Fitiavana hafa mihitsy ny an'i Dada hany ka somary manahirana an'i Andriamasimanana Andry ny mahita ny teny lafatra indrindra anehoana izany:
"Efa betsaka ny teny,
Voalaza ombieny, ombieny,
Fa tsy misy mahalaza,
Ny fitiavanao ry dada".
Betsaka tokoa ireo teny natolotra an'i Neny tamin'ny fankalazana ny fetin'ny reny teo. Tsy tokony ho ambakan'izany ny omena ny ray satria samy tiantsika izy ireo araka ilay andinin-tenin'i Régis Rajemisa-Raolison tsy afaka eo imolotra hoe:
No samy andalàko azy ireny"
Mazava ho azy fa mahavantana ny poety ny manolotra fehezan-tononkalo ho an'ny fetin'ny ray toy ny an'i GPR (Gasy Poeta Rasolofomanana) ity:
Ity tononkalo ity
dia nataoko ho anao irery ihany
Mirary fety sambatra aho sy feno fy
ho valim-pitia ho anao tsy mety lany".
Na tsy mangataka tambiny amin'ny zanaka aza ny ray dia rariny loatra raha asiana fanamarihana ny andro lehibe isan-taona toy izao. Amin'i Jean Narivony ohatra dia ny fankatoavana ny anatra nomeny no voatonony voalohany amin'ny valim-pitia:
"Mba inona kosa no havaliko ireny
fitiavan-tsy ritran'i dada sy neny ?
manaraka tsara izay anatra omeny;
mivavaka ho azy no valim-babeny".
Eo indrindra ny fanohanana ara-panahy. Ny ara-batana sy ny ara-tsaina kosa no anehoan'i Régis Rajemisa-Raolison ny valim-babena:
"Tohano 'reo rah'sendra reraka,
Ny sitraka enti-matory".
Ny vavaka sy ny fankasitrahana nolazain'ireo poety roalahy andrarezina ireo no naravon'i Anarim amin'ny hoe:
"Misaotra anao ry Dada !
Hitsinjo anao hatrany
Ka ho sambatra tokoa
Mandra-piala eto an-tany".
Ny Kristianina dia manana Ray iombonana, Ilay "any an-danitra any", Ilay be fitiavana sy be fandeferana ary deraina. Tsara tahafin'ny raim-pianakaviana Izy amin'ny maha ray hita maso azy ary hananana toe-panahy kristianina. Tsy izy ihany anefa fa ny fianakaviana manontolo. Fanararaotra ny fety tahaka izao hanavaozana ny endri-pitiavana eo amin'ny Ray aman-dReny sy ny zanaka ary eo anivon'ny mpianakavy. Misy ireo manao izany ho antom-pivoriana sy fanolorana fanomezana iraisan'ny rehetra. Tsy amin'ny alalan'ny fitaovana hita maso ihany anefa fa amin'ny vavaka voatonona teo, ny fankatoavana anatra...
Aza hadinoina kosa ange ry mpamaky olon'ny fo, ny poezian'ny poetanao !
Ttf. Ilay pretra iray izay dia nangataka tamin'ny kristianina tao ampiangonana mba tsy iarahaba azy amin’ny fetin’ny ray. « Natokana ho an’ny ray niteraka io alahady ka zary manompa ilay fiarahabana toa milaza fa niteraka any antsisiny any aho » hoy izy. Marihina fa ny fetin’ny pretra rehetra dia ny Alakamisy Masina ary ny pretra mpiandraikitra faritany na curé kosa dia azo hanaovana fety manokana ny 4 aogositra.